musha Asia Jennie Kim Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Jennie Kim Biography inoratidza Chokwadi paChidiki cheKecheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Hupenyu Hupenyu, Hupenyu hwePamoyo uye Hupenyu Hwechokwadi.
Iko kuongorora kwakazara kweHupenyu Hwake Nyaya, kutanga kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazove Akakurumbira.
Nyaya Yeupenyu hwaJennie Kim ..
Ehe, iwe neni tinoziva kuti ndiye mumwe we Vakadzi Vakanyanya Rappers muK-pop. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezvaJennie Kim's biography, zvinoyevedza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Jennie Kim Kukura Kwechikoro:
Jennie Kim akaberekwa musi we 16th waJanuary 1996 kuna baba vake naamai vake muGangnam District, Seoul Capital Area, South Korea.
Ndiye ega mwana akazvarwa kuvabereki vake ane mazita anoramba ari asingazivikanwe nenyika.
Sezvo aive iye oga mwana wemhuri yake, Jennie aive nemusikanzwa wekuwana chaaida kubva kuvabereki vake. Nekufamba kwenguva, akave nerimwe zano rekupa zano rake pane zvakakosha mhuri.
Waizviziva here?… Chimwe chezvisarudzo zvekutanga kuti Jennie Kim akashandisa kupi chikamu chehudiki hwake yaive sarudzo yake. Tichitarisa kumashure kuhupenyu hwehupenyu hwaJennie Kim, mumwe aizoona kuti aive nemhosva yakakwana yekushandisa mazuva ake ekutanga ekuyaruka muNew Zealand.
Jennie Kim Mhuri Nhoroondo:
Muimbi wedu ane mukurumbira wekuKorea akaberekerwa mumhuri yakapfuma. Vabereki vake vese vane mhuri yavo yemhuri yakabatana nemadzitateguru avo eKorea. Hapana mubvunzo kuti vabereki vaJennie Kim vakagadzira hukama hwepedyo naye.
Vazhinji vateveri vakapupurira kune yakasimba mai-mwanasikana chisungo chiripo pakati paJennie naamai vake.
Nezviratidzo zvese, nyika yeKorea yakawedzera kushinga uye yakatarisa pakuve muimbi, nekuda kwerutsigiro rusingaperi rwevabereki vake nedzimwe hama dzemhuri.
Jennie Kim Biography - Hupenyu hwepakutanga:
Rapper wedu ane mukurumbira wekuKorea akapedza mazuva ake ekutanga ehucheche kwaakaberekerwa. Kukura muKorea, akadzidza kutaura, kuverenga, uye kunyora mumutauro wake wekumba - chiKorea. Pazera remakore masere, Jennie nevabereki vake vakaenda parwendo kuenda kuAustralia neNew Zealand.
Ndichiri muNew Zealand, Jennie akafunga kuramba ari munyika sezvo airatidzika kunge akave nekufarira munzvimbo iyi. Pasina kupokana, akatenderwa kugara imomo uye akapedza makore matanhatu anotevera achikurira kune imwe nyika.
Jennie Kim Dzidzo Yekumashure:
Muimbi weK-pop aive nedzidzo yepamutemo. Pakutanga, ainetseka kudzidza Mutauro weChirungu.
Kunyangwe raive basa rakaoma kuita, Jennie, zvakadaro, akadzidza kutaura uye kunyora zvakatsetseka muChirungu Mutauro. Nhasi, anotaura Spanish, Chirungu, chiJapan, uye chiKorea.
Jennie akanyoreswa kunodzidza kuWaikowhai Intermediate Chikoro muAuckland, New Zealand. Akachengetedza hupenyu hwakaderera achiri kuchikoro uye akatambura zvakaoma kuti aenzanise hunyanzvi hwekutaurirana nevamwe vadzidzi.
Pasina kutambisa nguva, Jennie akaenda kunodzidza ku ACG Parnell College apedza kudzidza.
Nyatso tarisa, Unogona kumuona here mubhuku rake rechikoro.
Izvo zvinowanzo davirwa kuti kutanga kwebasa rakakura ipfungwa yakafungidzirwa. Jennie akatanga kukudziridza chishuwo chake chekuenda mune yevaraidzo nyika achiri pakati chikoro. Akanangisa kuve nyanzvi yekutamba ballet muhupenyu hwake hupenyu.
Nekudaro, haazi wese munhu ane rombo rakanaka kuti abudirire sekufunga kwaraimbofungidzirwa. Panyaya yaJennie, icho chaaive akavavarira, chaive chidimbu chidiki zvichienzaniswa nemukurumbira waaizozowana.
Jennie Kim Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Nekufamba kwenguva, vechidiki lass vakatanga kutsvaga akasiyana maindasitiri evaraidzo pamwe nekushanda kwavo.
Lucky Jennie akatanga kufarira K-pop ndokusangana YG Varaidzo panguva yekutsvaga kwake. Akafunga kutora chikamu muYG inotevera kuongororwa.
Akatora chikamu muYG Varaidzo yekuongorora sedanho rake rekutanga kuve mukurumbira.
Pakazosvika makore gumi nemana, vabereki vake vaida kuti aende kuFlorida uye nekuenderera mberi nevadzidzi vake nekudzidza zvemutemo kana kuita hunyanzvi hwekudzidzisa. Nekudaro, murombo Jennie akadana mhuri yake achichema uye akataura kusuwa kwake nesarudzo yavo.
Vachikurudzirwa nerudo rwavo rukuru kwaari, vabereki vaJennie vakabvuma kuita kwake uye vakamukumbira kuti adzokere kumusha kwake. Paakasvika kuKorea, Jennie akapinda muchirongwa chakaongororwa neYG Varaidzo.
Jennie Kim Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Rimwe rematambudziko akakura akatarisana naJennie kwaive kutya kwake vanhu vaasingazive uye kutadza kwake kugadzira zviitiko zvinosetsa. Akaburitsa pachena kuti aigona kungoti "Mhoroi" kune vatongi panguva yekuongorora kwake.
Neraki, Jennie akabudirira kujoina chitambi uye akatanga semudzidzi. Kunyangwe Jennie pakutanga akaongorora zvemumhanzi, akasarudzwa semurapi, nekuda kwekugona kwake kutaura Chirungu.
Zvakangodaro, aive achiri nezvakawanda zvekudzidza asati awana budiriro munyika yemukurumbira.
Ona kuti aitaridzika asina mhosva uye akanaka sei iye achidzidziswa.
Jennie Kim Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Muna 2012, YG Varaidzo yakaisa pikicha yaJennie pane yepamutemo blog. Mufananidzo wacho wakawana zvakawanda zveruzhinji uye wakasimudza kuziva kwevanhu. Kunyangwe zita rake risina kuburitswa pamwe chete nemufananidzo, iye akatumidzwa zita rekuti "Chakavanzika Musikana".
Mushure mekudzidziswa zvakaoma kwemakore matanhatu, Jennie nenhengo dzebhendi rake, Blackpink vakafumura mukana wavo nekuburitsa album yavo yekutanga, "Square Mumwe".
Iyo album yaive nezviratidziro senge Boombayah uye Whistle iyo yakamisikidza nhamba yekutanga pane Goan Dhijitari Chart. Kubudirira kwavo kunosimudzira bhendi kune yakakwira mwero K-pop bhendi paBillboard Social 50.
Blackpink's dambarefu album, Square imwe.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora yaJennie Kim's biography, muimbi weK-pop akakwira kusvika padanho repamusoro repasi rose mimhanzi vanozivikanwa.
Kugona kwake kwakamupa mukana wekuva muimbi wekutanga muKorea kuita paCahelhella Music Festival. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Hazvishamise here? Ona kuzvivimba kwake panguva yekuita kwake ega kuCoachella Music Festival.
Jennie Kim Kurarama Hupenyu:
Kupesana nemifungo yevazhinji vateveri, Jennie Kim anogona kunge asina kuroora panguva yekunyora iyi bio. Kubva paakasimuka mukurumbira muindasitiri yemimhanzi, Jennie anga achibatanidzwa mune yakasarudzika uye isina hushoma hukama.
Ndiani mukomana waJennie Kim mukomana?
Mune imwe yekuenzanisa hupenyu hwake hwehupenyu nehupenyu hwake hwerudo, Jennie akapinda muhukama hwepedyo naKim Jong-in.
Nekudaro, iyo yerudo-shiri dzemusi kubva 2018 kusvika 2019 vasati varambana. Kim Jong-in, uyo aive mukuru makore maviri kuna Jennie, aivewo muimbi uye aive nechero zodiac maitiro saiye.
Hukama hwake naEXO's Kai (Kim Jong-in) hauna kugara kwenguva yakareba.
Kunyangwe agency yaJennie Kim yakatanga kuramba nhau nezvehukama hwake, shiri dzerudo dzakaonekwa dzakabata maoko mumugwagwa ivo vachifamba. Zvisinei, rudo rwavo rusingakundikani rwakavatadza sezvo vaviri ava vakazoenda nenzira dzakasiyana.
Jennie naLisa Kukakavara Kunoitika:
Wedu wemukurumbira weK-pop anodavirwa kunge ari murudo nemurungu wake weBlackPink, Lalisa Manoban.
Zvakare, Jennie naLalisa vakatsanangurwa sevanotamba kupfuura vese mubhendi reBlackpink. Pane dzinoverengeka nguva, ivo vakagovana isingakanganwike nguva uye vakatumira mamwe emifananidzo yavo pasocial media.
Kuda kwake Lalisa (R) hakunzwisisike.
Kuita kwavo kune mumwe nemumwe vachiri pachikuva ndechimwe chezvikonzero zvakakosha nei vateveri vavo vafungidzira kudanana pakati pavo.
Kunyange zvakadaro, inongova nyaya yenguva vasati vataura pachena kune vateveri vavo nezvehukama hwavo.
Jennie Kim Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Iye akakurumbira rapper wechiKorea akawana budiriro mune rake basa, nekuda kwekutsigirwa kwemhuri yake. Muchikamu chino, tinokupa ruzivo rwevabereki vaJennie Kim pamwe nedzimwe nhengo dzemhuri yake.
Nezve Jennie Kim 'Amai:
Mumakore mashoma apfuura, Jennie Kim agara achishamisa nyika nemitambo yake yakatanhamara.
Zvisinei, zita ramai vake rinoramba riri chakavanzika kune nyika. Chinhu chimwe chete icho isu chechokwadi ndechekuti amai vaJennie director wekambani yekuSouth Korea yekuvaraidza - CJ E&M.
Nyatso tarisa kuna amai vaJennie Kim. Haana kunaka here?
Nezve Jennie Kim 'Baba:
Zita rababa vaJennie zvakare harina kutaurwa chero kupi pamambure. Asi, anozivikanwa kunge ari kumhanyisa chipatara.
Kuedza kwake kurera Jennie pamwe chete nekuedza kwaamai vake kwave imwe yenheyo pane iro kubudirira kwake kuri.
Nezve Jennie Kim 'Vanun'una:
Jennie Kim haana hama kana hanzvadzi. Aive iye ega mwana wevabereki vake. Sezvo ari iye oga mwanasikana wemba yake, vabereki vaJennie vakave nechokwadi chekuchengeta kambani yake kumudzivirira kubva mukugara ega uye kusurukirwa.
Nezve Hama dzaJennie Kim:
Iko hakuna ruzivo rwechokwadi pamusoro pasekuru nasekuru vaJennie Kim naambuya pamwe nasekuru nasekuru vake.
Kupfuurirazve, haana vazukuru kana babamunini uye ruzivo nezve vatete vake nababamunini hazviwanikwewo pamambure.
Jennie Kim Hupenyu Hwega:
Hupenyu hwepachivande hwemhanzi wedu wekuKorea akapemberera ane zvakawanda zvinonakidza chokwadi. Kutanga neye horoscope, iye ane musanganiswa weCapricorn zodiac maitiro.
Kutyaira kwake kwekuwana hunyanzvi uye zvine hunyanzvi pabasa rake humbowo hwekuti akagara nhaka yehumwe hunhu hwezodhiac.
Muhupenyu hwake hwehunyanzvi, Jennie anofarira kuridza piyano pamwe nenyere, uye anozvigona kwazvo. Kune rimwe divi, ake ekuzvivaraidza nezvaanofarira kunze kwehupenyu hwebasa rake ari kubika uye kutora mifananidzo.
Wedu K-pop mukurumbira haasi iye chete murapi mukuru, asi zvakare ari akanaka mubiki.
Waizviziva?… Ongororo yakatorwa muBlackPink's ch + kuti ndiani mubiki akanakisa aive mubhendi. Mhedzisiro yeongororo yakaratidza kuti Jennie Kim akazove mubiki akanakisa muboka.
Jennie Kim Mararamiro:
Muimbi wedu wekuKorea akajaira kurarama hupenyu hwoumbozha. Iye anotora mukana wese waanawo kuti aonekwe akanaka uye akanaka.
Rudo rwake rwezvigadzirwa zveGucci haruna muganho sezvo iye anochengetera wardrobe yake nezvipfeko zvakawandisa, hazvishamise kuti akatumidzwa zita remadunhurirwa rekuti. Wemunhu Gucci.
Iye ane kuravira kukuru kwemafashoni, zvisinei, rake raanofarira brand ndiGucci.
Mari yaJennie Kim inokosha inofungidzirwa kunge iri mari inokwana yemamirioni masere. Semuridzi ane mukurumbira wekuKorea, akashanda nesimba kuti asimukire kukirasi yemamirionea. Nekudaro, Jennie haafarire kuratidzira imba yake nemota pa internet.
Mufananidzo unoshamisa sei waJennie panguva yemodelling foto chikamu neKia.
Jennie Kim Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Jennie Kim nyaya, hezvino zvimwe zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi izvo zvingakubatsire iwe kuti unzwisise zvizere nezve rake biography.
Chokwadi # 1: Nyaya dzeNicknames:
Jennie Kim akapihwa mazita emadunhurirwa akati wandei muhupenyu hwake hwese. Kutanga, akadanwa Jerry nekuda kwerudo rwake kuna Tom naJerry katuni.
Chechipiri, akadaidzwa Mandukie nekuti nhiyo dzayo dzaive dzakafanana naMandu (dumplings). Pakupedzisira, Jennie akatumidzwa zita remadunhurirwa Wemunhu Gucci nekuda kwake uye neruzivo rwezvigadzirwa zveGucci.
Chokwadi # 2: Kubatana naRihanna:
Semhizha iri kuuya, Jennie Kim akazivisa kune nyika kuti iye waaitevedzera muenzaniso Rihanna. Akapedza chikamu chenguva yake achidzidza kuzvipira kwakapihwa naRihanna mumimhanzi kuti abudirire munguva pfupi yadarika.
Hazvishamisi kuti ave achikwanisa kuvandudza kusvika padanho rekuva mukurumbira muAsia.
Chokwadi # 3: Jennie Kim, muKristu kana muBhudha?
Wedu akakurumbira weKorea superstar muKristu. Nekudaro, hukama hwake naLisa hwakamutungamira kune imwe nguva akanamata mutembere yechiBhudha muThailand. Kunyangwe Jennie akaita nekuda kwerudo kushamwari yake, zvaakaita zvakamutsa mibvunzo ine nharo pamusoro pekuti kutenda kwake kunogara kupi zvechokwadi.
Chokwadi # 4: Kusimbisa:
Jennie haana kudzora tarenda rake kumimhanzi chete; pachinzvimbo, iye akashinga zvakare munyika yekuteedzera. Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti iye akateedzera yeChanel Korea Runako mugore ra2018. Iye akagoneswawo kuve modhi yemamwe akawanda mabhureki kubva paakakwira mukurumbira.
Iye muenzaniso unodakadza. Tarisa uone kuti anogarika sei.📷: Jennie Kim.
Ingoitika kuitira kuti iwe utarise nekukurumidza paJennie Kim's Biography. tafura (pazasi) ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezve iye muchidimbu uye zvine mutsindo.
Zita rizere Jennie Kim
Stage Zita naJennie
Akazvarwa 16th January, 1996
Net Worth $ Miriyoni 8
Pets Imbwa (Kai na Kuma)
urefu 1.60 m (160 cm kana mashanu mamirimita 5 inches)
uremu 49 kg (99 lbs)
Rudzi rweropa B
zvinhu Kubheka uye kutora maPiipi
Ndatenda nekutora nguva ino kuverenga yako yakazara chinyorwa cheJennie Kim's Hupenyu Hupenyu. Pasina kupokana, nhengo dzese dzeBlackpink vane tarenda zvakanyanya.
Ndichiri kuisa ichi chinyorwa, vagadziri vedu vaive vakatarisa kururamisa uye kusasarura. Ndokumbira kuti uise zvaunotaura pane ako pfungwa nezve iko kunyora-kumusoro.